ဤရွေ့ကားသင်သည်သင်၏ဘဝကိုပြန်လည်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအခုအချိန်မှာထွက်အဲဒီမှာအထဲကအများဆုံး FUCKED တက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဖြစ်ကြသည် - သတင်း
ဤရွေ့ကားသင်သည်သင်၏ဘဝကိုပြန်လည်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအခုအချိန်မှာထွက်အဲဒီမှာအထဲကအများဆုံး fucked တက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဖြစ်ကြသည်
အချို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများသည်အမှိုက်ပုံးဖြစ်သည်။ Beyonce ဟာ Solange ရဲ့အမေဖြစ်ဖို့အရမ်းလွန်းပြီး ၀ မ်းသာအားရအရမ်းကောင်းပါတယ်။ Melania Trump ဟာကိုယ်ပွားမဟုတ်တော့ဘူး။ သူမကငရဲပဲ။ Louis Tomlinson ရဲ့ကလေးကတကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။ သို့သော်အချို့သောသီအိုရီအဟောင်းများနှင့်အသစ်များဖြင့်မျှတမှုရှိသည် အရမ်း အများကြီးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား အပြင်ပန်းအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောယူဆချက်များမှတဆင့်မင်းကိုသွားခွင့်ပြုပါ။
Megan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှအမှန်တကယ် Joanna နှင့် Sam တို့ဖြစ်ကြသည်
- Travon အခမဲ့ (@Travon) နိုဝင်ဘာ 30, 2017
ရုပ်ရှင်၌, Sam (ဂျင်းမဟုတ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းယောက်ျားတွေကိုသုံးပါသူ) သည်အမေရိကန်ဂျိုဟန်နာကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူမအမေရိကန်သို့လေယာဉ်ပျံတက်စဉ်ဂျနီဖာအဲနစ္စတန်အီမစ်ရ်မမ်ကိုလေဆိပ်သို့ပြေး။ သူမအားတားဆီးရန်လုပ်ဆောင်သည်။ သူရရှိသမျှအားလုံးသည်ပါးပြင်ပေါ်တွင်နမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးသူမထွက်ခွာသွားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Megan (သို့) 'Joanna' သည် Suits တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်တိုင်အောင်ဟယ်ရီသည်စနူကာကိုဝတ်။ စစ်တပ်ထဲ ၀ င်သည်။ Channel4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အချို့ကိုအပြန်အလှန်မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှမတွေ့မီနှင့်ခြေချင်းခေါက်။ မခံနိုင်သောတီဗွီအင်တာဗျူးတွင်သူတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုကြေငြာသည်။
ငါစာသားဆိုလို ဟုတ်တယ် Megan ။
တကယ်တော့ Lorde ဟာ ၄၅ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ
9:53 pm တွင် PDT တွင်အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ တွင် Lorde (@lordemusic) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများလွန်းပြီးနုနယ်သောအသက် ၁၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူသည် BMW ကားများတွင်အရှိန်မြှင့ ်၍ အခြားကလေးကြယ်များကဲ့သို့ Snapchat ပုံပြင်များတွင်ပေါင်းပင်များကိုဆေးလိပ်သောက်သင့်သည်။
သူမဒီရက်စက်တဲ့မုသားကိုစွန့်လွှတ်လိုက်မိလို့ဒေါသထွက်မိသလား။ ကောင်းပြီ 'Lorde Age Truthers' သည်ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်များ၏အမှန်တကယ်အသက်ကိုဖော်ထုတ်ရန်နိုးနိုးကြားကြားရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Vanity Fair မှကောလာဟလများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသောအခါ Lorde ကမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဲလာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပါပြီ။
သူမ၏သီချင်းအဖွဲ့တွင်သူမဤသို့သီဆိုသည် - 'ငါဂရုမစိုက်ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တုန်းကပေါ့။ 16-25 မီးရထားကဒ်ကိုမရရှိနိုင်သူဟုသူမက 'ဟောင်း' ကိုဆိုလိုပါသလား။ သို့မဟုတ်လူများတွင်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းနေပြီလား။
သူမဟာဖက်ရှင်စာရေးဆရာ Tavi Gevinson ကိုလည်း The Virgin Suicides ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကငါနဲ့အတူတကယ်စကားပြောခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါဆိုလိုတာကငါကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲ။ Er အများကြီးထစ်ထုပ်လား?
ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြရန် Emma Carmichael သည် d.b.a. Ella Marija Lani Yelich-O'Connor ၏မွေးစာရင်းကိုရရှိရန်ဒေါ်လာ ၁၇.၀၂ ဒေါ်လာကြေးပေးခဲ့သည်။ Lorde ကို ၁၉၉၆ နို ၀ င်ဘာလ ၇ ရက်၊ နယူးဇီလန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာဤသည်မွေးဖွားလက်မှတ်မဟုတ်ပါ။ နယူးဇီလန်အစိုးရအနေဖြင့် 'data printout' ဟုခေါ်သည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေးထားပါသည်။ အဆင်ပြေလား? ထင်တာပဲ။ နှင့်နယူးဇီလန်၏အဘယ်အစိတ်အပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ရှိသနည်း Lorde ကိုကြားဖူးလား သူမသည် Beverly Hills ရှိအိမ်ရှင်မများအသင်းမှသရုပ်ဆောင်သူတစ် ဦး နှင့်တူသည်။
Avril Lavigne သည်လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ်ကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး Melissa Vandella ဟုခေါ်သောကိုယ်ပွားဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်
avril lavigne ကွယ်လွန်သွားပြီးပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီကြိုးမျှင်ဖြင့်တူညီသောပုံစံဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် pic.twitter.com/9eearQ2rte
- yeehaw ကောင်မလေး (@givenchyass) မေလ 13, 2017
#notmyavril စစ်သည်များအဆိုအရ Lavigne စစ်မှန်သည်အဘိုးကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်သူမကိုယ်သူမသေဆုံးခဲ့ရသည်။ သူမ၏ပိုက်ဆံဆာလောင်နေသောစံချိန်တင်တံဆိပ်ကသူ၏သဏ္likာန်သည်ဆုံးရှုံးရန်အလွန်အဖိုးတန်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အိုကေဒါငါသူတို့ကိုကြည့်နေတယ်။ သူတို့မျက်လုံးတွေရဲ့ထောင့်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပုံသွင်းလိုက်ပြီ pic.twitter.com/ag2G37NsSt
- A (@ashlynnktigner) မေလ 14, 2017
ထံမှ birthmark / မှဲ့သက်သေ @onlymodelz pic.twitter.com/ZXK6ADbl19
- yeehaw ကောင်မလေး (@givenchyass) မေလ 14, 2017
စာသားအဘယ်သို့ဆိုလို xxx ပါဘူး
ထို့အပြင် Avril သည် Nickleback မှအဆိုတော်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ငါဆိုလိုတာကပန့်ခ်ရော့ခ်စကာဘွိုင်းမင်းသမီးလေးဟာဒီနူးညံ့ချောမွေ့တဲ့သူနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာ။ သူကနေကာမျက်မှန်ပတ်ပတ်လည်ကိုပတ်ထားတယ် - ငါထပ်ပြောစရာလိုသေးလား။
'Avril' ကမိခင်များနေ့အတွက်သူမ၏မိခင်နှင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွစ်တာစာသာရေးခဲ့ပါသလား။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာတော့သူမအမေကသူ့ကိုမကြည့်ဘူး pic.twitter.com/32WdTajkri
- Chrissy Teigen ကလေး (@onlymodelz) မေလ 15, 2017
ပြီးတော့သူမ emo bangers ကနေစေးကပ် - ချိုသာတဲ့ pop music android ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုသွားခဲ့သလဲ။
ငါဆိုလိုတာကငါ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က 'ငါ့အတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာအတွက်များစွာသော' Avril ဟာဒီဟာကိုဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူမ အစွမ်းကုန် သူမ၏ဆံပင်ရွှေရောင်ကွယ်လွန်သွားပြီ၊ boob အလုပ်ရခဲ့ပြီးဂီတအရသာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သလား။ သို့သော် Avril အသစ်သည် Hills မှဇာတ်ကောင်တစ် ဦး နှင့်တူသည်။ အဖြေတစ်ခုတည်းရှိတယ်။
Avril Lavigne နဲ့ Melissa Vandella တို့ကိုအခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာပဲအတူတူသွားဖို့ရဲတစ်ယောက်လိုတယ်။
- JuiCé? (@SadgalCe) မေလ 15, 2017
Tupac သည်အသတ်ခံရခြင်းမဟုတ်ပါ၊ မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ပြီးယခုကျူးဘားတွင်နေထိုင်သည်
'သမိုင်း' အရ (သင်ဖတ်စာအုပ်များ၊ ဒိုးများ၌သူတို့ပြောသမျှကိုယုံကြည်ပါက) Tupac သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် Las Vegas တွင်တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကိုရင်ဘတ်၊ လက်နှင့်ပေါင်၌အကြိမ်ကြိမ်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ မင်းယုံတယ်
ဤမျှလောက်များစွာသောအချက်များရှိသော်လည်းအခိုင်မာဆုံးအထောက်အထားမှာ 'ရန်သူကိုလှည့်ဖြားရန်လူတစ် ဦး ၏သေခြင်းကိုအတုအယောင်ပြုခြင်း' ဟုကျော်ကြားသောပြန်လည်ဆန်းသစ်သောနိုင်ငံရေးသီအိုရီပညာရှင်နီကိုလိုမက်ဒီယာဗယ်လီနှင့်သူ၏ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။
Tupac သည် Makavelli အမည်ရှိစင်မြင့်အမည်ကိုပင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် AM ALIVE K. ၏ပုံကြမ်းဖြစ်ပြီးသူ၏အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Don Killuminati ၏ 'အနုပညာ' Exit 2Pac, Enter Makaveli 'ကိုဖတ်ရသည်။ သူမသေဆုံးခင်တစ်နှစ်အလိုတွင် I I Die Tonight ကဲ့သို့သောသီချင်းများဖြင့်ရက်ပ်သည်သူ၏သေခြင်းကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဒါကိုသက်သေပြရန် Tupac နှင့် Rihanna တို့သည် TupTup ရှိစိမ်းလန်းစိုပြေသောကလပ်တွင်ရှိနေကြပုံကိုကြည့်သည်။
Tupac သေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ Rihanna က ၈ နှစ်ပါ။ ငါသူအသက်ရှင်လျက်ဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ် !!! pic.twitter.com/KNKf0uOzRH
- မိုက်ကယ်ဂျီဂျီနို (@MichaelGeorgino) ဇန်နဝါရီလ 23, 2016
Kim K သည်ပင်သိသည်။
Hmmm Tupac သည်အသက်ရှင်နေပြီးအလုပ်လုပ်နေသလား။ !?
Kim Kardashian West (@kimkardashian) မှစက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်၊
သူက“ AM ALIVE K” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါကမြို့ကနေတက္ကစီအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တော့သူမဆီကလွဲပြီးခေါ်ဆိုမှု ၇ ခုရှိတယ်။ ငါအသက်ရှူနေတုန်းပဲ
ကြောင်း convo မှရည်ညွှန်းအတွက် update ကို
တေလာဆွစ်ဖ်၊ စာတန့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ချာ့ခ်ျဟောင်းဇီးနာလာဗီအားပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်း pic.twitter.com/7MDSZmRmbi
- Drew Laskowski (@drew_laskowski) သြဂုတ်လ 20, 2016
'တေလာ' ကလက်စားချေတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါ ၉.၉၉ / ၁၀ မှာသူမသီချင်းတွေအကြောင်းပြောနေတယ်။ လုပ်တယ် စုစုပေါင်း သူမဟာနတ်ဆိုးကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်လို့ခံစားရတယ်
ကောင်းပြီအင်တာနက် Swift အရတကယ်တော့ Zeena LaVey (စာတန်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်၏ ၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၀) ဖြစ်သည်။ သူမကမှော်အတတ်ကိုသုံးပြီးပေါ့ပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
တေလာ Zeena Lavey အဖြစ် pic.twitter.com/UBn7pAwAb6
- နှင့် (@dangeroustriper) သြဂုတ်လ 23, 2016
သူမသည်တွမ် Hiddleston hexed defs ။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်သူမနာမည်ပါသည့်တီရှပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဝတ်ဆင်ရမည်နည်း။ ဒါရှက်စရာ။
ဇ ow ဖွယ်ရှိဤသည်မှန်ကြောင်းပါသလဲ ၈/၁၀
ငါသူမကသန်းပေါင်းများစွာသော Love Story ကိုသူတို့ရဲ့ iPod တွေပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့သူဘယ်လိုဆွဲဆောင်ခဲ့သလဲ။
မင်းသားမင်းသားလေးကိုစိတ်ကူးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဂျော့ခ်ျရဲ့ squidgy အနည်းငယ်ကောင်းကင်တမန်မျက်နှာကိုရလိမ့်မယ်။ ငါသည်သူ၏ teeny, weeny button ကိုနှာခေါင်းကိုကြည့်ဆိုလို။
မင်းသားဂျော့ခ်ျကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ? pic.twitter.com/IjVhTbjVh1
- Aisha Liyana (@AishaLiyana) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၅
ဟုတ်ကဲ့ Aisha၊ ချစ်တယ် ။
သို့သော်တော်ဝင်မိသားစုသည်ဘာကြောင့်များချစ်စရာကောင်းသောချစ်စရာကောင်းသောစက်ရုပ်ကလေးကိုတီထွင်ကြမည်နည်း။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုရှယ်ယာများရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းဖို့သုံးနိုင်တယ် သိသာထင်ရှားပါတယ် ။
မင်းသားဂျော့ခ်ျက HI ကို ဦး ခေါင်းမှသခင်အားပြောကြားသည်မှာယနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 7,2017 ။ pic.twitter.com/JpvF7JyHeE
- Prince George (@ PrinceG13846284) စက်တင်ဘာ 7, 2017
X Men ၏ဇာတ်ကောင်နှင့်ဆင်တူသည်သူ၏ otherworldly ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ကုန်ကြမ်းကျွမ်းကျင်မှု၏သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ စကားပြော The Daily Mail ဆစ်ဒနီကလေးဆေးရုံမှဒေါက်တာအန်တိုနီယိုမီနာကသူသည်ကစားစရာများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်တက်တက်ကြွကြွကစားနေပြီး ၉ လအတွင်းအလွန်ကောင်းသောလမ်းလျှောက်သွားနိုင်သည့်အလွန်လျင်မြန်သောကလေးငယ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုဂျော့ခ်ျနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းမည်မျှရောင်းချသည်ကိုယခုကြည့်ပါ။ ဥပမာ သူသည်ကျောင်းပထမနေ့တွင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သော moccasins ဖြစ်သည် :
သူသည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင် ၀ တ်ဆင်ထားသောရှပ်အင်္ကျီကို ၂၄ နာရီအတွင်းအိတ်ကပ်ထဲ၌ရောင်းလိုက်သည် :
ပြီးတော့ puy ပဲဟင်းတွေကိုသူရဲ့တစ်နှစ်ပေါင် ၁၈၀၀၀ ရှိတဲ့အစားအစာမီနူးမှာအဓိကကျတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တယ်၊ အများပြည်သူဝယ်ယူလိုသောအနက်ရောင်အမျှင်လေးများစားသုံးမှုသည်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည် ။ Sabarot ကုမ္ပဏီ၏ပဲဟင်းကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကဲ Antoine Wassner ကပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ L'Express သတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ 'ဒါကကြယ်ပွင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု' ပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၂ ပတ်ကြာခွေးကလေးကိုကိုခိုးသွားတယ်
Love Island မှအာဒံသည် Geordie Shore တွင်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်သည့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်
Cambridge University Press မှစာအုပ် ၇၀၀ ကျော်ကို Cambridge Core တွင်အခမဲ့ရယူနိုင်သည်
ဤသည်ကိုသင်ယခု McDonald ရဲ့ cheeseburger အခမဲ့ရနိုင်ပုံဖြစ်ပါသည်
UCL သည် Green Gown Climate Action အတွက်ဆုရရှိခဲ့သည်
ငါအမေရိကန်ပိုင်ကောင်စီကမဲပေးနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး Key ကိုထုံးပိုင်, ကြိုးစားခဲ့သည်
လူများသည် Cecil ဟိုတယ်အားဒေသခံအဖြေများအားဝေမျှနေကြသည်
Netflix ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် Tiger King မှဂျိုး Exotic သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။
လူတွေကကျွန်မတို့ရဲ့ Free the Nipple ကင်ပိန်းအတွက်သူတို့ရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့ရင်သားပုံတွေကိုပို့နေတုန်းပဲ။ ငါဘာကြောင့်လဲလို့သူတို့ကိုငါမေးခဲ့တယ်